Box Box anụ ahụ Production Line Series Factory - China Box anụ ahụ Production Line Series Manufacturers na Suppliers
OK-220 Fulldị Mpempe Akwụkwọ Ntanetị Na-akpaaka
Arụ Ọrụ na Akụkụ Njirimara 1. A na-anakwere ụdị mbukota dịka nri nri na-akpaghị aka, mmeghe igbe, ịkụ ọkpọ, ogbe mbipụta. Kọmpat na ezi uche Ọdịdị, mfe ọrụ na ukpụhọde. 2.Servo moto, ihuenyo mmetụ, PLC akara usoro na igwe-igwe interface ngosi na-arụ ọrụ ọzọ doro anya na-adaba adaba. Na ogo akpaaka dị elu, igwe ahụ dịkwuo mma. 3.The akpaka ihe ndokwa na erute usoro na nakweere t ...
OK-100B Fulldị Mpempe Akwụkwọ Ntanetị Na-akpaaka
Arụ Ọrụ na Akụkụ Njirimara 1. A na-anakwere ụdị mbukota dịka nri nri na-akpaghị aka, mmeghe igbe, ịkụ ọkpọ, ogbe mbipụta. Kọmpat na ezi uche Ọdịdị, mfe ọrụ na ukpụhọde. 2.Servo moto, ihuenyo mmetụ, PLC akara usoro na igwe-igwe interface ngosi na-arụ ọrụ ọzọ doro anya na-adaba adaba. Na ogo akpaaka dị elu, igwe ahụ dịkwuo mma. 3.The akpaka ihe ndokwa na erute usoro na nakweere ...
OK-400B Type Full-Auto Box Tissue Ada Ada Bundling Mbukota Machine
Arụ Ọrụ Na Nhazi Atụmatụ 1.Ejiri igwe a maka igbe anụ ahụ na-agbakọ ngwugwu. 2.Vetikal usoro ịkwọ ụgbọala maka akara agụba iji hụ akara akara kwụ ọtọ ma dịgide. 3.Adopt onu akara imewe, ngwaahịa ogologo nwere ike gbanwee kpamkpam. 4.Seal akara elu nwere ike gbanwee kpamkpam dị ka ngwaahịa si dị elu Model & Isi Nka na ụzụ kwa Model OK-400B Mbukota Speed ​​(ikpe / min) ≤40 Main ahu gụpụta akụkụ (mm) L1850xW1450xH1400 Machine Ibu (...
OK-10 Handdị njikwa Ngwaọrụ
Nrụ ọrụ dị iche iche na atụmatụ atụmatụ 1.Packing forms dị ka nri akụrụngwa nri, nri nri, slitting, njikwa nri, na-edozizi, wdg. Kọmpat na ezi uche Ọdịdị, mfe ọrụ na ukpụhọde. 2.Servo moto, ihuenyo mmetụ, PLC akara usoro na igwe-igwe interface ngosi na-arụ ọrụ ọzọ doro anya na-adaba adaba. Na ogo akpaaka dị elu, igwe ahụ dịkwuo mma. 3.The akpaka ihe ndokwa na erute usoro na nakweere fa ...